Jwxo-shiil, oo Jabuuti Tagay Jilbahana Haysta Geele – Rasaasa News
Jun 19, 2010 Jwxo-shiil, oo Jabuuti Tagay Jilbahana Haysta Geele
Rasaas, Jabuuti – wararka ka imanay dalka Jabuuti ayaa tibaaxay, in Jwxo-shiil uu shalay gabal dhicii gaadhay Jamhuuriyada dalka Jabuuti. Ma jiraan ilaa iyo hada wax war ah oo ka soo baxay sababta uu u tagay Jwxo-shiil Jabuuti iyo waliba cida ka dambaysa tagitaankiisa dalkaasi.
Kooxda uu hogaamiyo Jwxo-shiil, ayaa waxaa saldhig u ahaa dhawrkii sano ee ugu dambeeyey dalka Eritrea, Jwxo-shiil-na inta badan waxaa uu deganaa magaalada Caasmara ee dalka Eritrea.
Dalka Eritrea iyo dalka Jabuuti ayaa waxaa dhexmaray dagaal dhul laggaga qabsaday dalka Jabuuti oo ay ka mid tahay degaanka Dumeera, taas oo wali ku jirta gacanta Eritrea. Waxaana mudo dheer u dhaxeeyey labada dal colaad ay wax ka qaban wayday UN-tu. Waxaana maalin dhawayd dhex maray heshiis labada dal ee Eritrea iyo Jabuuti, kaas oo ay ka dambaysay boqortooyada Qatar.
Jwxo-shiil, oo ay wakhtiyadii u dambaysay haysatay go,odoon siyaasadeed oo kaga imanayey dhinaca dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Waxaa maalin dhawayd Jwxo-shiil, waraysatay Ideecad VOA, waxaana uu aad ugu cel celiyey oo yidhi “Ismaaciil Cumar Geele waa oday Somaliyeed xilbaana ka saaran in uu anaga iyo Itobiya na dhex galo”.
Dalka Jabuuti, ayaa dhawaan lagu qabtay heshii nabadeed oo dhexmaray Itobiya iyo Jabhada Xoraynta Somali galbeed, oo mudo dheer dagaal kula jirtay dalka Itobiya. Dhab ahaan Itobiya iyo Jabuuti waa laba dal oo saaxiib ah, ganacsi xoog lehna uu u dhaxeeyo.
Dhinaca kale waxaa uu heshii nabadeed dhexmaray todobaadkii ina dhaafay, garabka ugu muhiimsan ururka ONLF, oo ay si xoog ah isuhayaan garabka uu hogaamiyo Jwxo-shiil.
Xukuumada Eritrea ayaa laba todobaad ka hor waxay soo caydhisay wakiilkii Jwxo-shiil u joogay dalka Eritrea, oo lagu magacaabo Cadaani [Ina-dhuubo], oo xiligan ku sugan dalka Denmark.
Banaan baxaweyn oo ay ka qayb galayeen qaar ka mid ah ururada ku kacsan dawlada Itobiya oo ay ka mid tahay kooxda Jwxo-shiil iyo dad Eritrean ah, ayaa lagu balansanaa in maalintii shalay ahayd oo ay bisha June 18, 2010, in ay banaanbax wayn ka dhigaan xarunta dambiyada caalamiga ee Heague [International criminal court icc] oo laggaga soo horjeedo dawlada uu madaxda ka yahay Meles Zinawi.
Sida ay wararku sheegayaan kooxda Jwxo-shiil, ayaa iyadu ka gaabsatay in ay ka qayb gasho banaanbaxaas, waxaana tagay oo kaliya Jaaliyada Holland ee Kooxda Jwxo-shiil, oo aan iyada lala socodsiinin sababta looga gaabsaday banaanbaxa.
Hadaba, marka la isu geeyo arimo badan oo jira, waa markii ugu horaysay ee uu Jwxo-shiil, dhuumaal iyo cadaanba uu ku tago dalka Jamhuuriyada Jabuuti. Waxaa aan shaki ku jirin in uu halkaas u tagay wadhadal dhexmaridoona isaga iyo safiirka Itobiya u jooga dalka Eritrea iyo nin ka socoda ciidamada wardoonka ee Itobiya, oo ay xaqiijiyeen warar hoose. Waxaana ay saadaashu tahay in ay wax isla meel dhigi doonaan xili dhaw oo ururada oo dhan hal dambiil wax loogu ridi doono.
Waxaa jira warar sheegaya in ay dawlada Itobiya dhawr goor gaashaanka ku dhufatay cosi ka yimid kooxda Jwxo-shiil. Sababtuna waxaa weeye baa la yidhi iyada oo ayna dawlada Itobiya u aqoonsanayn Jwxo-shiil in uu yahay wadani Somalida Ogadeeniya, balse uu yahay Janan Somaliyeed.
Waxay codsadeen xubnaha kooxdiisu in uu xilka ka dago si xal looga gaadho arimaha colaada wuuna ka gaws qabsaday arinkaas.
Waxaa hore ugu sii sugnaa baa la leeyahay Jamhuuriyada Jabuuti xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil haystana dhalashooyin Jabuutiyaan ah.
Si kastab arintu ha ahaatee waxaa la sugayaa wax uu kala soo noqdo Jwxo-shiil, Jabuuti iyo in uu u sii gudbo caasamada Ismaamulka Somalida Ogadeeniya ee Jijiga.